Sawir Naadir ah iyo Waalidiinta Shah Rukh Khan oo da'yar. | shumis.net
Home » Celeberity News » Sawir Naadir ah iyo Waalidiinta Shah Rukh Khan oo da'yar.
Sawir Naadir ah iyo Waalidiinta Shah Rukh Khan oo da'yar.
Dhowr wargeys oo kamida kuwa kasoo baxa dalka India ayaa faafiyay sawir naadir ah oo ey ku jiraan labada waalid ee dhalay xiddiga caanka ah ee Bollywoodka "Shah Rukh Khan" Fatima Khan iyo Taaj Mohamed Khan.
PINKVILLA oo kamida wargeysyada lagu faafiyay sawirkaan ayaa ka dhawaajiyay in Taaj Mohamed Khan uu kamid ahaa siyaasiyiintii ugu cad-cadaa ee dowrka wayn ka ciyaaray in Hindia hesho madax banaanida ey maanta heysato.
Shah Rukh Khan oo dhowr jeer ka sheekeeyay taariikhda waalidkiisa ayaa tilmaamay inuu u haayo ixtiraam iyo qadarin, isagoo sii raaciyay waan jeclaa iney joogaan xiligaan si ey u arkaan guulihiisa uu ka sameeyay shineemooyinka India.
Waxaa xusid mudan in King Khan mashquul ku yahay xiligaan sawirka filimkiisa cusub ee FAN.
Title: Sawir Naadir ah iyo Waalidiinta Shah Rukh Khan oo da'yar.